မြားများ: October 2009
အလျားလိုက် ဘဝမှာတင် နံရံတွေ ကာဆီးထားနေပြီ..
ကျွန်တော် ပဲ့တင်ထပ်ခဲ့တဲ့ အိပ်မက်တွေရဲ့ ရောင်ပြန်ဟပ်မှုမှာလည်း.
ကျွန်တော်ဟာ ကျိန်စာ အထပ်ထပ် သင့်နေပြီ …အမေ.
တစ်ဘဝစာ ထက်မြက်တယ် ဆိုတဲ့ မျက်လုံးတွေရဲ့ စူးရှမှုဟာ
လောက အဝန်းက နာရီတွေကို ဆန့်ကျင်ဖို့ ကြိုးစားခဲ့တာပါ..
ကျွန်တော့်မှာ မိုးကုပ်စက်ဝိုင်းကို မကျော်လွန်ခဲ့ဘူး အမေ…။
ကျွန်တော့် ဟစ်အော်သံမှာ မိုးချုန်းသံ အထပ်ထပ် ပါပေမယ့်
တိမ်တောင်တွေ ကျွန်တော့်နောက်မှာ ပါမလာဘူး.
ကျွန်တော် အရ မခေါ်နိုင်ခဲ့ဘူး..အမေ..
ညွှတ်ပျောင်းရမှုမှာ အသာအယာ ခေါင်းညိတ်သော်လည်း
ခေါင်းမာချင်သေးတဲ့ အနုမာန စိတ်တချို့က
ဘဝဆိုတာ တာဝန်ကြီးလွန်းပါတယ် အမေ..
ခလုတ်ထိမှ အမိတ ဆိုတာကြီး မပြောပါနဲ့တော့လား.
ကျွန်တော့်မှာ ခုခံကာကွယ်ဖို့ စကားလုံး မရှိတော့လို့ပါ…
အံစာတုံးထက် ဘက် ပိုများပါတယ်..အမေ….။
ပင်လယ်အထိ စီးမျောဖို့ ရည်စူးခဲ့တာပါ..
လူငယ်ဘမှာ ရွယ်ရည်ရာ ချစ်စိတ်တွေကို ..
တော်ရုံနဲ့ စွန့်နိုင်ခဲ ခဲ့တယ် အမေ..
ကိုယ့် အကြောင်းကို သိဖို့ထက်..
သူတပါးအကြောင်းကို ပိုပြီး စူးစမ်းခဲ့တယ်…
ကျွန်တော်လေ အလွမ်းတွေ သိမ်းထုပ်ရင်း..
ကျွန်တော့် ဘဝကို ကျွန်တော် မြှုပ်နှံဖို့ ကြိုးစားခဲ့တာပါ…
ကျွန်တော်ဟာ ဂူသွင်းခံရဖို့ အခွင့်အရေး မရှိဘူး….
စကားလုံးတလုံး အတွက်တောင် တန်ဖိုး မရှိခဲ့ပါဘူး ..အမေ…။
ချစ်တဲ့ ကဗျာစိတ်ရဲ့ ဒဏ်ရာ အနာတရမှာ.
ကျွန်တော်ဟာ တရားခံ မဖြစ်လိုဘူး..
ကျွန်တော့် အိပ်မက် မှားသလား ..အမေ….
ကျိုးကြောင်း မဆီလျော်ဘူးလို့ ဆိုရင်..
ကျွန်တော်တို့ဘဝရဲ့ အန္တိမ ရည်ရွယ်ချက်မှာ
အမေနဲ့ မဆိုင်ပေမယ့်..အဆိပ်သင့် ခံနေရတဲ့ ဘဝမှာ
ကျွန်တော် အူမ မတောင့်လည်း သီလစောင့်နိုင်ပါတယ်..အမေ…
ဒုက္ခတရားဟာ မွေးဖွားလာကတည်း ပါလာတာမို့
ကျွန်တော့် အပေါ်မှာလဲ နေသားတကျ ရှိနေမှာပါ……။
ဆင်စီးပြီး မြင်းရံစေချင်တဲ့ အမေ့ရဲ့ စိတ်အတွက်
ကျွန်တော် နားလည်ပေးလို့ ရပေမယ့်..
ကျွန်တော့်မှာ အဲဒီ ကံတရား ပါမလာဘူး အမေ..
အရာရာကို ပုန်ကန်ချင်နေတာ မဟုတ်ပေမယ့်..
ပုံစံဟောင်းကိုတော့ အမြဲ တော်လှန်ချင်တယ်…..
ကျွန်တော့် အိပ်မက်တွေရဲ့ မဆုံးတဲ့ ကွင်းပြင် ကျယ်ကြီးထဲ
ကျွန်တော် အဆုံးတိုင် ရွက်လွှင့် ပါရစေအမေ….
ဘယ်အရာမှ ဂုဏ်ယူစရာ မဟုတ်ပေမယ့်..
ကျွန်တော် မြတ်နိုးတဲ့ အရာကိုတော့ ပိုတန်ဖိုးထားချင်တယ်…အမေ….။
တဘဝစာ ဝေးကွာသွားတာ မဟုတ်ပါဘူး…
ကျွန်တော် ခြေတလှမ်းနောက်ဆုတ် သွားတာပါ…အမေ..
ကျွန်တော်ဟာ မိသားစုဆီ အရောက်သွားခဲ့တာပါ..
ကျွန်တော့် ဘဝတခုလုံးကို စီးပွားရေး အဆောက်အအုံအောက်မှာ မမြှုပ်နှံချင်ဘူး အမေ…
ပြုပြင် ပြောင်းလဲဖို့ မဖြစ်နိုင်တော့ဘူး.
ကျွန်တော့် ခံစားချက်နဲ့ ယုံကြည်ချက်တွေကို သစ္စာ မဖောက်ချင်လို့ပေါ့…
ကျွန်တော်ဟာ ပင်လယ်ဆီ အရောက်သွားချင်နေဆဲ မြစ်တစ်စင်းပါ…အမေ…။ ။
လောကရဲ့ မရေရာတဲ့ တွေ့ဆုံခြင်းမှာ
ညီမလေးက ကိုယ့်ကို ကိုယ်ယောင်ပြတယ်
ဘဝတွေကို လိုသလို ထိန်းညှိကြဖို့
နှစ်ယောက်သား သစ္စာ ပြုပြီးနောက်
ကိုယ်တို့ဟာ လုံလောက်တဲ့ အကွာအဝေးမှာ ရှိမနေခဲ့ကြဘူး…
အဲဒီညမှာ ကိုယ်ဟာ အသည်းအသန် ဖျားတယ်..။
ညီမလေးရဲ့ သံသယတဝက် ချစ်ခြင်းမှာ
ကိုယ်က တခါတခါ ဓားစာခံဖြစ်လိုက်
အရှူံးအနိမ်းများစွာနဲ့ အလွမ်းဟာ စနေမိုးလို ရွာချခဲ့..
ဗာဟီရတွေ များခဲ့ရတဲ့ နေ့တနေ့ ပေါ့ကွယ်..။
ညီမလေးအရိပ် နဲ့ မလွတ်မြောက်နိုင်ခြင်းမှာ
ဘဝကို လိုသလို စေခိုင်းလို့ မရနိုင်ဘူးဆိုတာ
ညီမလေး တယောက် သိပါလေစ..
သံသရာရဲ့ အဆုံးတနေ့ ညီမလေးသာ မရှိခဲ့ရင်
ကိုယ်လေ ဘယ်လို နိဗ္ဗိန္ဒ တေးတချို့နဲ့မှ ပျော်မွေ့နိုင်မှာ မဟုတ်ဘူး..
ကိုယ်ဟာ ညီမလေးအပေါ် ချစ်စိတ်တွေနဲ့
ကိုယ့်အိမ်ယာကို မေ့လျော့ပစ်ရဲတဲ့ လူမိုက်ကြီး တယောက်ပေါ့..
ကိုယ့်သံသရာမှာ ကိုယ်ဟာ ညီမလေးအတွက်
ကိုယ့်ရေတပွက်စာ ဒုလ္လဘတရားရဲ့ အသက်ဆက်ခြင်းအတွက်
လက်ကျန် အိပ်မက် အစုအဝေးမှာ
ညီမလေးဟာ ကိုယ့်ထွက်သက်ကို ညင်သာစေမယ့်
နတ်ဘုရားတပါးရဲ့ အကြင်နာ လက်တစုံပေါ့..
ဟောဒီ ချစ်မြတ်ခြင်း အနာတရ နေ့ရက်တွေမှာ
ကိုယ်ဟာ ဘယ်လိုအလွမ်းနဲ့မှ အသားမကျနိုင်ဘူးကွဲ့..
အလွမ်းဖြင့် သည်းသောမိုးမှာ ချစ်ခြင်းသာ တိုး၍ ပြိုတယ်..
ကိုယ်ဟာ သံသရာမှာ နောက်တပတ် ပြန်လည်ဖို့
လမ်းဆုံ လမ်းခွ တနေရာကို ရောက်နေခဲ့သူပေါ့ကွယ်….။ ။
အဲဒီ မိုင်ထောင်ချီ ဝေးတဲ့ ခရီးမှာ
ငါတို့ ချစ်ခြင်းတွေ ဘယ်လောက် နီးစပ်ခဲ့ပါသလဲ...
နှလုံးသားရဲ့ ဒဏ်ရာ အနာတရမှာ
ညီမလေးကို လွမ်းတဲ့ အလွမ်းဟာ ရင်တစ်ခုလုံး လှိုင်းထတယ်..
ကန္တာရ တစ်ခုစာ ခြောက်ကပ်လို့.
အကြင်နာ အချစ်ညရဲ့ သံယောဇဉ်ကြိုးတစ်စနဲ့..
ကိုယ့် အိပ်မက်ကို ချည်နှောင်လိုက်ချိန်...
စိုထိုင်းဆတွေ သိပ်သည်းလို့ အရာရာ လေးလံနေခဲ့တာ..
ညီမလေးရဲ့ ချစ်ခြင်းမှာ ပြိုချလိုက်ဖို့...
ငါဟာ အလိုလို အုံ့မှိုင်း နေခဲ့မိပြီ...
အရာရာ မသေချာခြင်းရဲ့ အနာဂတ်မှာ..
စေညွှန်ရာ ကံကြမ္မာတချို့ရဲ့ နောက်ကွယ်က..
ကိုယ့် ခြောက်အိပ်မက်တွေရဲ့ အဆုံး အရှူံးမှာ..
ကိုယ့်ဘဝရဲ့ မျှော်လင့်ခြင်း တဘက်ကမ်းမှာ.
ညီမလေးရဲ့ လက်ဖျားတွေ အေးစက်နေပြီလား..
တချိန်မှာ နွေးထွေးမှု အပိုင်းအစ တချို့နဲ့...
တစ်ပတ် ပြန်လည်လာမယ့် သံသရာကို မစောင့်တော့ဘူး....။ ။
ဟောဒီ မြေကမ္ဘာပေါ် လမ်းလျှောက်ခဲ့ရခြင်း တချို့အတွက်.
ပါးလျခဲ့ရတဲ့ အစတေးခံ ဖိနပ်တို့မှာ နာကျင်ခြင်းတွေ အပြည့်ရှိခဲ့တယ်.
ဝိုးတဝါး အလင်းရောင် လမ်းမှာ ပျောက်ဆုံးခဲ့ရပြီး.
မေ့လျော့ခြင်းများနဲ့ အသားကျခဲ့ရသော ဖိနပ်များဟာ
အခုတော့ တုန်ရီစွာ ငုံ့လျှိုးနေဆဲ....
"ချစ်သူစီးတဲ့ ဖိနပ်ကလေးလည်း ချစ်တယ်.."
မောင်သိန်းဇော်က ပြဇာတ်က ခဲ့တယ်...
"ရွှေဖိနပ်မှာ အစိမ်းရောင် ကြက်ခြေခတ်နဲ့ ကောင်မလေး."
တာရာမင်းဝေက ဝတ္ထုတပုဒ် ရေးခဲ့တယ်....
"ရေစီးမှာ မျောပါသွားတဲ့ ဖိနပ်ကလေးကို စွန့်စွန့်စားစား လိုက်ဆယ်ပေးတဲ့ ကျွန်တော့်ကို
သူမက ဆုအဖြစ် သကြားလုံး တလုံး လက်ဆောင်ပေးခဲ့ပါသည်" ...သစ္စာနီ
မျဉ်းကျားမှာ လမ်းဖြတ်ကူးရင်း သဲကြိုးပြတ်သွားတဲ့ ဖိနပ်ကလေးကို
မောင်ရန်ပိုင်ဟာ မစွန့်လွှတ် နိုင်ခဲ့ဘူး...
အဲဒီဖိနပ်ကလေးကို သူခေါင်းအုံး အိပ်ခဲ့တာကြာပေါ့...
ဆိုဗီယက်ဝန်ကြီးက အစည်း အဝေးမှာ
စီးထားတဲ့ ဖိနပ်နဲ့ ခုံကို ခေါက်ပြီး စကား ပြောခဲ့တယ်...
ဖိလစ်ပိုင် သမ္မတ ကတော်က
ဖိနပ် အရံပေါင်း ခုနစ်ထောင်ကျော် နဲ့ သူ့အခန်းထဲမှာ ကျေနပ်နေခဲ့ဖူးတယ်..
အပြစ်မဲ့ ပြည်သူတွေရဲ့ စုပုံထားတဲ့ ဖိနပ်တွေရဲ့ ဓာတ်ပုံ...
အီရတ်က ဂျာနယ်လစ်တယောက်ရဲ့ နာမည်ကျော် ဖိနပ် တဘက်....
ကမ္ဘာမှာ နောက်က လိုက်လုပ်တဲ့ သူတွေလည်း..ရှိရဲ့...
ဈေးဘန်း ရွက်ထားတဲ့ ကောင်းမလေးရဲ့ ဖိနပ် တဘက်
ဘတ်စ်ကားပေါ်က အဆင်း ပြတ်တောက်သွားခဲ့တော့..
သူမရဲ့ မျက်နှာ လေး ငိုမဲ့မဲ့ ဖြစ်သွားရပုံ...
ကျွန်တော် ခုထိ မမေ့နိုင်ခဲ့ဘူး...
ဒဏ်ရာများနဲ့ ဖိနပ်တွေဟာ လမ်းထိပ်က အမှိုက်ပုံ ဟောင်းထဲမှာ.
တိတ်ဆိတ်စွာ လဲလျောင်းလို့..သူ့ဇာတိကို ငံ့လင့်နေတာ....
ဖိနပ်ကလေးရဲ့ ဘဝဟာ ဘယ်မှာ ဆုံးမယ် မသိတော့ဘူး...။ ။
ကျွန်တော် နောက်ထပ် ကဗျာတွေ မရေးတော့ပါဘူး..
မလတ်ဆတ်တဲ့ အရေးအသားတွေနဲ့ ခင်ဗျားကို ထပ်ပြီး မနှောက်ယှက်တော့ပါဘူး.
ဘောပင်နဲ့ စာရွက်နဲ့ ကဗျာရေးတဲ့ခေတ် ကုန်ပြီဆိုလို့..
ကျွန်တော် နောက်ထပ် ကဗျာတွေ မရေးတော့ပါဘူး.
ဒီအရေးအသားတွေက Avant-Garde တပ်ဦး အနုပညာကို မသိရှာဘူး...
ဒီအရေးအသားဟာ အနုပညာအတွက်လို့ ရည်ရွယ်မထားတဲ့ အတွက်
ဒီအရေးအသားဟာ ပြည်သူ့အတွက်လို့ ရည်ရွယ် မထားတဲ့ အတွက်
ဒီအရေးအသားဟာ ဒီအရေးအသားအတွက်လို့ ရည်ရွယ်မထားတဲ့ အတွက်
ဒီအရေးအသားဟာ ရေးချင်သလို ရေးထားတော့ အရေးအသားများ ဖြစ်နေတဲ့ အတွက်
ကျွန်တော် နောက်ထပ် ကဗျာတွေ မရေးတော့ပါဘူး...
သမိုင်း အနုပညာဆိုင်ရာ စိန်ခေါ်မှုအရ..
ကဗျာတော်လှန်ရေးမှာ ဒီအရေးအသားဟာ မပါဝင်နိုင်တဲ့ အတွက်
ဒီအရေးအသားဟာ အလုံးစုံ လွတ်မြောက်နယ်မြေ မဖြစ်သေးတဲ့အတွက်
(ဘာသာစကားကို ကြားခံအဖြစ် အသုံးပြု နေသေးတဲ့ အတွက်)
ဒီအရေးအသားဟာ ခေတ်ပေါ်ကဗျာဗေဒပေါင်းစုံကို အမှီမလိုက်နိုင်တဲ့ အတွက်..
ဒီအရေးအသားဟာ တခါတခါ ကွန်ဆာဗေးတစ်ဆန်နေချင်သေးတဲ့ အတွက်
ဒီအရေးအသားဟာ ခေတ်ပြိုင်အနုပညာကို တခုမှ မဖမ်းဆုပ်နိုင်တဲ့အတွက်
(ပါဖောင့်မင့်၊ အင်စတော်လေးရှင်း၊ ပို့စ်ပိုယဲ့ထရီ၊ အယ်လ်ပီ၊ ပို့စ်အယ်လ်ပီ၊ ဆလမ် အစရှိသဖြင့်....)
တခုမှ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ စစ်ဆေး ထုတ်ဖော် မပြနိူင်တဲ့ အရေးအသား ဖြစ်နေတဲ့အတွက်.
ကျွန်တော် နောက်ထပ် ကဗျာတွေ မရေးတော့ပါဘူး....
မလတ်ဆတ်တဲ့ အရေးအသားတွေနဲ့ ခင်ဗျားကို ထပ်ပြီး. မနှောက်ယှက်တော့ပါဘူး...
ဘာမှ မရေးခြင်းသည်လည်း. ကဗျာလို့ တစုံ တယောက်က ပြောခဲ့တဲ့ အတွက်..
ပင်မရေစီးနဲ့ သီတာခုနစ်တန် တောင်စဉ်ခုနစ်ထပ် ခြားလိုက်ခြင်းဖြင့်
အသစ်တွေရဲ့ နှုန်းစံတန်ဖိုးတွေက ထူထောင်လို့ ရ မရ..
ရီဗော်လူးရှင်း(revolution) နဲ့ အီဗော်လူးရှင်း(evolution) ဟာ
ရင့်ကျက်မှု အတူတူလို့ ဆိုချင်တာလား...
လှပြီးသား မျက်နှာကိုပဲ မိတ်ကပ် ထပ်လိမ်းခြယ်တာလား.
အသစ်ကို ပြုလုပ်ဖို့ ဆော်သြခဲ့တဲ့
တီ.အက်စ်.အီးလီယော့ တယောက် အုတ်ဂူအသစ်ကလေးမှာ လဲလျောင်းလို့
အဲဒီအချိန် အသစ်ကို ပြုလုပ်နိုင်ခဲ့လေသလား..
ရှိပြီးသား အသစ်နဲ့ နောက်ထပ်ရောက်လာတဲ့ အသစ်.
ထပ်တူ ပြုလို့ အံကျ မကျ..
မကျရင် ခွင် အသစ်တခု ထပ်ပြုလုပ်ရမလား.......
အသစ်ဟာ ခံစားစရာ စိတ်ကွန့်မြူးမှု သက်သက်လား..
လက်ရှိ အရှိထဲက လွတ်မြောက်သွားရင်..
နောက်ထပ် အဖြစ်ဟာ အသစ်ဆိုတာ သေချာရဲ့လား..
အသစ်ဟာ ဟောင်းဖို့ အချိန်တခုကို ဖြတ်ရတာ..
သဘာဝ စီးဆင်းမှု အသစ်တခုလား....
အင်္ကျီ လုံချည် အသစ်ကလေးကို မျှော်လင့်နေခဲ့တာရော..
ကောင်မလေးရဲ့ စိတ်ကူး အသစ်လား....
ခုလို လိုရာ ဆွဲထည့် ရေးလိုက်တာရော အသစ် ပုံစံ တခုလား..
အသစ်ကို ဘောက်ခတ်ပြီး..ပြတိုက်ကို ပို့လို့ ရမလား.
ဟောဒီ အသစ်(New)နဲ့ အင်တာဗျူးမှာ
အသစ်(New) က တခုမှ ဖြေမသွားခြင်းကရော...
အသစ်တွေထဲက နောက်ထပ် အသစ် တခုလေပဲလား.....။။။။။
ဟောဒီ ဒုလ္လဘတရားတွေ ကိုပဲ မရောင့်ရဲနိုင်တဲ့အခါ
ငါဟာ အောက်ခြေလွတ်နေတဲ့ တတိယတန်းက လူတယောက်ပဲ..
အတောင်ပံ တချို့ စိုစွတ်ခြင်းနဲ့
အဝေးက ငါ့ဘဝရဲ့ အနာဂတ္တံကို မမျှော်လင့်ခဲ့သူ...
ပျော်ရွှင်ခြင်း တစုံ တရာအတွက်
အနုမာနတွေကို လျှော့ချဖို့ မေ့ပစ်ခဲ့...
အလွမ်းနဲ့ မေတ္တာတရားက ငါ့ရဲ့ အဝေးမှာ
ကမ္ဘာလောက တခုစာ ပျောက်ဆုံးဆဲ...
ကိုယ့်ကံကြမ္မာကို နာကျင်စွာ ကျိန်ဆဲနေတဲ့ အန္ဓ စစ်စစ် အန္ဓ တယောက်လေ..
ဖြေပြေစရာ လောကမှာ ဝေးကွာလွန်းတော့.
မြို့ပြဘဝရဲ့ညတွေကို ရှည်လျားစွာ ကျော်ဖြတ်နေခဲ့ရသူ..
သူဟာ ကိုယ့်အရိပ်ကို တက်နင်းချင်နေတဲံ့
မသိသား ဆိုးဝါးစွာ လွင့်ပါးချင်နေတဲ့ သူ
အရိပ်ယောင် တခုကို ဖုံးကွယ်ချင်နေဆဲ....
ကိုယ့်အတ္တနဲ့ ကိုယ် လုံလောက်ဖို့ .
ဘဝကို အမှောင်လောက တဘက်ခြမ်းကနေ
ရှင်သန်ခြင်းနဲ့ အသက်ဆက် နေရသူ.....
အစွန်း အထင်းတချို့နဲ့ ကင်းလွတ်ရာ ကင်းလွတ်ကြောင်းကို
အမြဲ တစေ ရှာဖွေနေဆဲ.......
သူငယ်ချင်း အကြောင်း ကဗျာရေးဖို့...
မီးစာကုန် ဆီခမ်း သွားတဲ့ အိပ်မက်တွေမှာ...
သူငယ်ချင်းက ဘဝကို ရေစုန်မျောလို့
ကသောမျောပါးနဲ့ ခုမှ ဘဝကိုလိုက်ဖမ်းတယ်...
တွယ်ငြိ မိရာ အသစ်အသစ်မှာ
ရင်ခုန်စွာနဲ့ လက်တစုံကို ဖမ်းဆုပ်ခဲ့ပေမယ့်
အကျနာခဲ့ရတာတော့ ..ဘုရားသခင်က မတရားဘူး...
ရွှန်းလက်လက် အရောင် တောက်ပမှုမှာ...
သူကိုယ်တိုင် မသိနိုင်သေးတဲ့ မျှော်လင့်ခြင်းများ...
ဘဝဟာ ခါးတယ် ဆိုတဲ့ သီချင်းကို
မူဆယ်မြို့ကို ကြိုဆို နှုတ်ဆက်အပ်သော ကျွန်တော်၏ ပထမဦးဆုံးကဗျာ
တရုတ်ပစ္စည်းတွေ အရမ်းပေါတယ်ဆိုတဲ့ မန္တလေးမြို့ကြီးကို
ကျွန်တော်၏ ချစ်လှစွာသော မူဆယ်မြို့က
ခါးထောက်ပြီး ဟားတိုက်နေခဲ့တာ ကြာပေါ့....
လွိုင်ဆမ်ဆစ် တောင်တန်းတွေ အနိမ့်အမြင့် ရှိသလို
မူဆယ်မှာ လည်း လူတန်းစား အနိမ့်အမြင့် ရှီပါတယ်...
ကမ္ဘာကြီးဟာ ရွာကြီး တရွာ ဖြစ်သွားကတည်းက
လူမသိ သူမသိ လမ်းကျဉ်းကလေးတွေနဲ့
သူ့ကိုယ် သူ ကျေနပ်နေပုံက..
ရေချိုးပြီးစ အပျိုဖျန်းမလေး တယောက်လို....
တိဗက် ကုန်းမြင့်ဘက်က လေတွေလည်း ပုံမှန်အေးစက်နေဆဲ..
မူဆယ်မြို့ကို ရစ်ခွေနေတဲ့ ရွှေလီမြစ်ရေက
နီလိုက် စိမ်းလိုက်...တက်လိုက် ကျလိုက်..
လောကဓံဆိုတာ မူဆယ်မြို့ သမိုင်းမှာ
China Telecom ရဲ့ Mobile တွေကို
တရုတ်ငွေရေစက်နဲ့ ပိုက်ဆံတွေကို ရေကြတယ်...
ပေါက်ဖော်ကြီးဆီမှာ...ATM Card ဆိုတာတောင် လုပ်ထားကြဆိုပဲ..
တချို့ ပထမတန်းစား လူတွေတောင်
ငွေရေး ကြေးရေးထက် တန်ဖို့ မဖြတ်နိုင်တဲ့ အရာတွေ
မူဆယ်မှာ မရှိတာတွေကို ကျွန်တော် မသိပေမယ့်
မူဆယ်မှာ ရှိတာတွေကိုတော့ ကျွန်တော် သိပါတယ်...
မူဆယ်မှာ မြို့ပြ ယဉ်ကျေးမှု အပြည့်အစုံ ရှိတယ်...
ဆင်းရွှေလီ စပါးခင်းတွေ ရှိတယ်...
MPT Gsm ရှိတယ်..
လိုင်စင်မဲ့ ဆိုင်ကယ်တွေ ရှိတယ်...
မြန်မာပြည်ရဲ့ အဓိက ကုန်စည် စီဆင်းမှုပါ ရှိတယ်....
မူဆယ်မြို့က လူတွေ ပင်ပန်းရင်..
မီးရောင်းစုံနဲ့ အခန်းကို သွားကြသတဲ့.....
ဒါကတော့မြို့ပြ ယဉ်းကျေးမှုရဲ့ လုပ်ရိုးလုပ်စဉ် ပဲ ဖြစ်မှာပါ....
လိုက်ကာ အကြီးကြီး ခြားထားတဲ့ ဟောခန်းအကျယ်ကြီးထဲမှာ...
စိတ်ကေနပ်မှုကို အဲဒီမှာ ရှာကြတယ်...
အာမခံ ပေးမထားပေမယ့် မူဆယ်မြို့က လူတွေ ပျော်ပါတယ်....
ပါရီကျဆုံးခန်း စာအုပ်ကို မဖတ်ကြဘူး..
ပျင်းတဲ့ အခါ War Craft ခုတ်ကြတယ်...
ကလေး ထိန်းတတ်ရင်လည်း စားဝတ်နေရေးဟာ..လုံလောက်ပါတယ်...
ခြေသည်းပေါ်မှာ ပန်းဖော်တတ်ရင်လည်း ဖြစ်ပါတယ်...
နောက်ဆုံး ဘာမှ မတတ်ရင်တောင်...ဖြစ်နိုင်ပါသေးတယ် ...တဲ့
တောင်ခိုးတွေ အမြဲလို လို ဝေနေတဲ့ မူဆယ်မြို့မှာ...
ဘာမဆို မျှော်လင့်လို့ ရသလို..
လက်မည်းမည်း တွေကိုကြောက်တတ်ရင်တော့ မူဆယ်က လက်မခံပါဘူး....
ဗမာ စကားသံ ဝဲဝဲ ကိုလည်း နားယဉ်လာမှာ ပါ....
လမ်းဘေးက ကလေးငယ်တွေကိုလည်း..မြင်တွေ့နေကျ အတိုင်း..
အချိုးကျ မြင်ကွင်းတွေလို ဖြစ်လာမှာပါ.....
ဘာပဲ ဖြစ်ဖြစ် မူဆယ်မှာ နေထိုင်နေတဲ့ ကျွန်တော့်အတွက်..
ကျွန်တော်ကိုယ် ကျွန်တော် ပျောက်ဆုံး သွားခဲ့ရင်...
ရုတ်တရက် ထမြည်တဲ့ Alarm ကို တပ်ဆင်ဖို့
အားလုံးကို အကြောင်းကြားထားပြီး ဖြစ်ပါတယ်.....
ဘယ်သူမှ စိတ်မချစရာ မရှိပါဘူး.
ကိုယ့်ကိုယ်ကို အမြဲတမ်း တာဝန်ရှိတယ်လို့
ထင်နေတဲ့ သူကိုလည်း အထင်ကြီးစရာ မလိုပါဘူး....
ကျွန်တော့်မှာ လုံးလုံး လျားလျား တာဝန်ရှိပါတယ်....
ဒီကဗျာ ကို ရေးနေတဲ့ အချိန်မှာ
အတ္တနောမတိ ကင်းရဲ့ လားလို့
ကျွန်တော် ကိုယ့် ကျွန်တော် ဆန်းစစ်နေပါတယ်.....
ဒီကဗျာဟာ မူဆယ်မြို့ကို မသိသေးတဲ့ သူတွေ အတွက်
အနည်းအကျဉ်း ရည်ရွယ်ချက် ရှိပါတယ်......
မူဆယ်မြို့ ကို ကြိုဆို နှုတ်ဆက်အပ်သော..
ကျွန်တော်၏ ပထမဆုံး ကဗျာ ဖြစ်ပါတယ်.............။ ။
ကိုယ့်ကိုယ်ကို မပိုင်ပဲ လောကကြီးထဲ လမ်းထွက်လျှောက်ချင်နေသော လူငယ် တယောက်အား...ကမ္ဘာကြီးက ချောင်းမြောင်းကြည့်နေသည်မှ
ာ ကြာခဲ့ပြီ..။ တမင်ပင် မေ့လျော့ထားခဲ့ကြသော ဘဝ၏ ချိုချို ခါးခါး..နေ့ရက်များ
အား အစပြန်မဖော်မိစေရန် ကျွန်တော် နေထိုင်နေသော နေရာအာ.လာရောက် လှဲကျင်းခြင်း မပြူပါနဲ့.။
အလွမ်းဖြင့် ဆည်ယူရရှိခဲ့သော မိန်းမတယောက်အား ချစ်ခင်ခဲ့ရမှုတွင် ဘဝမှာ ဘယ်လောက် အရေး ပါနိုင်သည်ဆိုသည်ကို မယုံကြည်တော့သည်မှာ နှစ်ကာလ အတန်ကြာခဲ့ပြီ.။ုထိုကိစ္စအတွက် . .ထိုမိန်းမ တယောက်ယောက်တွင် တာဝန် ရှိခဲ့သည်ဟု ကျွန်တော် ဘယ်တော့ မှ ပြောလိမ့်မည် မဟုတ်ပါ..။
ကြံကြီးစည်ရာ ..ဒါမှ မဟုတ်..ကြံမိကြံရာ..ပြောမိသည်ဟု ယူဆတော့မည် ဆိုလျှင် ကျွန်တော် ခင်ဗျားကို ဘာမှ ဆက်ပြောတော့မည်မဟုတ်ပါ..။မိန်းမတယောက်သည် ကျွန်တော်၏နောက်ဆုံး စကားတခွန်း.(နှုတ်ဆက်ချိန်)
ကို အရေးတယူ နားထောင် မသွားခဲ့သည့်အတွက်...ခုကိစ္စနှင့် ပတ်သတ်၍ ကျွန်တော် အတန်အသင့် နားလည်ပြီး
အိပ်၍ မရသော ညတည၏အလယ်တွင် မိန်းမတယောက်အား သတိရနေမိသူအဖို့ နာကျင် ခံစားရရုံမှ လွဲ၍ အခြားဘာမှ အကျိုးတရား ရှိလိမ့်မည် မဟုတ်ပါ..။လွဲမှားသော အယူအဆများ၏ နောက်တွင် ဘဝဆိုသည်မှာ
မိမိ မျှော်လင့်ထားသလို မဖြစ်နိုင်ဆိုသည်ကို အချိန်မီ သဘောပေါက်ရန်..လုံလုံလောက်လောက် အကြောင်း
ပြချက် ရှာရန်.ကိုယ့်ကိုယ်ကို သင်းသတ်ဖို့ လိုပါလိမ့်မည်.။
ကျွန်တော်သည် မိန်းမတယောက်၏ စက်ကွင်းမှ မလွတ်မြောက်နိုင်သေးသော အန္ဓ ပုထုဇဉ် တယောက်ဟု
အပြစ်မြင်နေ ဦးမည်ဆိုလျှင် ကိုယ့် ပေါင်ကို လှန်ထောင်းနေသူ တယောက်သာ ဖြစ်နေပါဦးမည်..။
ကျွန်တော်သည် ဆင်ခြေလုံလောက်စွာဖြင့် ရှင်သန်နေထိုင်နေသူ တယောက်ဟု သဘောပေါက်လာသော တနေ့တွင်..မိန်းမတယောက်သည် အလိုလို ပြင်ပသို့ ရောက်ရှိသွားပါလိမ့်မည်..။ဝမ်းနည်း ဝမ်းသာခြင်း ကင်းစွာ..
မိမိကိုယ် မိမိ နှစ်သိမ့် လာနိုင်သော တနေ့တွင်..ကျွန်တော်လည်း..အလိုလို ပြင်ပသို့ ရောက်ရှိသွားပါလိမ့်မည်..။
တေဇာအောင် (အောက်တိုဘာ ၈,၂၀၀၉)
ကျွန်တော့် ပတ်ဝန်းကျင်မှ အဖြစ်အပျက်တချို့ ချောင်းဆိုး ပျောက်ဆေးပြား စားနေကြချိန်တွင်..ကျွန်တော
်သည် ကဗျာတပုဒ်ကို ကာရံမပါပဲ အလိုက်သင့် ရေရွတ်နေခဲ့သည်။ ကာရံ မပါသော ကဗျာကို ရွတ်နေသောကြောင့် အသံမှာ
ညှင်းပြောင်းခြင်း မရှိဟု ပြောလာလျှင် သင့်ကို ဇော်ဇော်အောင်က နားမထောင်နဲ့ဟု သာ ပြောပါလိမ့်မည်။ ပိုံစ်မော်ဒန်
အကြောင်းကို တဆိတ် တအိတ် လုပ်၍ ပြောနေသာ သူ အများအား...မမြင်နိုင်သော အရပ်မှ နေပြီး ရယ်မော နေသော
တစုံ တယောက်သည် အသေအချာ ရှိနေခဲ့ပါသည်.။
ဤကမ္ဘာပေါ်၌ အိုင်ဒီယာ(မဂ္ဂဇင်း မဟုတ်ပါ) လှိုင်းလုံးများ အသည်းအသန် ရွာသွန်းပြီး သွားသော အခါ..ငုတ်တုတ်
မေ့ကျန်ရစ်သော လူများမှာ..ဆိပ်ကမ်းတွင် ကုန်ထမ်းနေသော အလုပ်သမား တဦး မပါဝင်ခဲ့ပါ..။သူ့အတွက် လိုအပ်သော ပမာဏမှာ ဆန် နို့ဆီဗူး သုံးလုံးနှင့် ချက်အရက် တလုံးသာ ဖြစ်ပါသည်..။သူ အရက်သောက်သည့်အတွက်
အပြစ်တင်မည်ဆိုလျှင်..သင့်အိမ်ရှေ့၌ ကွပ်ပျစ်တခု မဆောက်မှ သာလျှင် အဆင်ပြေပါလိမ့်မည်.။
စောစောက ရွာသွန်းခဲ့သော မိုးစက်များ အတွက် ဝမ်းနည်းနေသူသည် ကိုယ့်ကိုယ် ကို မကျေညက်သူသာ ဖြစ်ပါသည်။ ကိုယ်တိုင် သွန်းလုပ်ခဲ့ခြင်း မဟုတ်ရပါပဲ မွေးဖွားလာခဲ့ရသော အဖြစ်အတွက် လောကကြီးအား. အပြစ်တင်နေသောသူကို မည်သူမျှ အရေးယူမည် မဟုတ်ပါ..။ကိုယ်တိုင် တရားစွဲရန်သာ ရှိပါသည်။ သက်တောင့်
သက်သာသေခြင်းတရားကို ရွေးချယ်ခြင်း၌ အဘယ်သူ တဦးတယောက်မှ အခွင့်မရှိပါ။
ကာလသုံးပါး နှင့် နေရာဒေသကြီး သုံးခုတွင် အရသာ အရှိဆုံး အခြေအနေမှာ အသက်ရှင်သန်နေထိုင်ခြင်းဟု
ကျွန်တော် ရှာဖွေတွေ့ရှိပြီး သည့်နောက်. Human againt human စာအုပ်အား..အဝေးသို့ လွှတ်ပစ်လိုက်မိသည်.။
ရှင်သန်ခြင်း ဆိုသည်မှာ ရှင်သန်ခြင်း အတွင်းမှာသာ ပျော်ဝင်နိုင်ပါသည်.။ အခြေအနေ အကြောင်းရပ် တိုက်ဆိုင်
ခဲ့၍ ဒုတိယမ္ပိ ရွေးချယ်ခွင့် ရှိလာသော ကျွန်တော် ဖြစ်လာခဲ့လျှင်..ကျွန်တော် လူ့အဖြစ်ကို ရွေးချယ်တော့မည် မဟုတ်ပါ..။ ဘယ်အရာကိုမျှ မတောင်းဆိုချင်တော့ကြောင်း မိတ်ဆွေ နားလည်ရန် မရေးပြနိုင်သည်မှာ ကျွန်တော့်ကို အပြစ်ပြောရန် မသင့်ပါ..။ကျွန်တော်၏ ဘာသာစကား သိမှုနယ်ပယ် ကျဉ်းမြောင်း လွန်းသောကြောင့်သာ ဖြစ်ပါသည်။
ယခုအချိန်မှ လွန်မြောက်သောအခါ..မိတ်ဆွေ တယောက်နှင့် အနော်မာ မြစ်ကမ်းဘေးတွင်.ဝီစကီ ကောင်းကောင်း တခွက် အတူတူ သောက်ရန်..စကော့တလန် တိုင်းပြည်မှ စမ်းရေ များကို ရေကာတာဆောက်၍ သိုလှောင်ထား
ရန်..အမှာပါးလိုက်ပါဦးမည်..။ လောလောဆယ်တော့ မြန်မာပြည်မှ အရက်ချက်စက်ရုံ မီးလောင်သွားသည့် အတွက်
များစွာ စိတ်မကောင်း ဖြစ်မိကြောင်း..နှစ်သိမ့်ပေးချင်ပါသေးသည်...။